I-Pipe Cutting Saw abavelisi, abaXhasi - I-China ipayipi yokusika iSaw Factory
I-SDC800 SDC1000 ye-angle angle band yabona
Umbhobho osebenza ngamanzi usebenze ngokukodwa ukulungiselela ukulungiswa kwamacandelo e-PE, i-PP kunye nezinye izinto ze-thermoplastic. Isetyenziselwa ukuveliswa kwengqiniba, iti, umnqamlezo kunye nezinye izinto. Umthamo 630 ukuba 1200mm OD. I-angle yokusika ifikelela kuma-degrees angama-67. Ukuthoba isarha kulawulwa ngamanzi. Njengama-clamps aphezulu e-V asetyenziselwa ukubamba amacandelo ombhobho endaweni. UKUSETYENZISWA kunye neempawu: 1. Ilungele ukusika imibhobho ngokwengelosi echaziweyo kunye nobukhulu ngelixa kusenziwa ingqiniba ...
I-Saddle Radius Band Saw-SRC630 SRC1000 SRC1200
Injongo eyakhiweyo yebhendi yokusika irediyasi efunekayo xa kusongelwa ukunciphisa iityesi kusetyenziswa umatshini we-SDM315, SDM630, SDM1200. Okanye xa kusenziwa izinto ezininzi zombhobho. Ukusika icandelo lepayipi ukuya kwi-radius echanekileyo yokuphuma kwemibhobho 63mm ukuya ku-315mm. >> Radius isarha isetyenziselwa ukusika imibhobho yesebe esetyenziswa kwimveliso yokunciphisa iti kunye nokuphindaphindeka. >> Indawo yokusebenza eyodwa kubandakanya isakhelo sebhendi eyenzelwe injongo kunye nejog yokuhlengahlengisa irediyasi ukuya kumbhobho wesebe ongqindilili 315mm ukuya ku-1000mm. >> Ukusika Umbhobho ...
Isaladi yeRadius Band Saw-SRC315
Injongo eyakhiweyo yebhendi yokusika irediyasi efunekayo xa kusongelwa ukunciphisa iityesi kusetyenziswa umatshini we-SDM315, SDM630, SDM1200. Okanye xa kusenziwa izinto ezininzi zombhobho. Ukusika icandelo lepayipi ukuya kwi-radius echanekileyo yokuphuma kwemibhobho 63mm ukuya ku-315mm. >> Radius isarha isetyenziselwa ukusika imibhobho yesebe esetyenziswa kwimveliso yokunciphisa iti kunye nokuphindaphindeka. >> Indawo yokusebenza eyodwa kubandakanya isakhelo sebhendi eyakhelwe-njongo kunye nejog yokuhlengahlengisa irediyasi ukuya kumbhobho wesebe onesibindi 63mm ukuya kwi-315mm. >> Ukusika Pipe Di ...
I-SDC315 SDC630 i-angle angle band yabona
Umbhobho osebenza ngamanzi usebenze ngokukodwa ukulungiselela ukulungiswa kwamacandelo e-PE, i-PP kunye nezinye izinto ze-thermoplastic. Isetyenziselwa ukuveliswa kwengqiniba, iti, umnqamlezo kunye nezinye izinto. Ubungakanani be-90 ukuya kwi-315mm OD. I-angle yokusika ifikelela kuma-degrees angama-67. Ukuthoba isarha kulawulwa ngamanzi. Njengazo izinto zokubopha ezisetyenziselwa ukubamba iziqwengana zepayipi endaweni yazo. UKUSETYENZISWA kunye neempawu: 1. Ilungele ukusika imibhobho ngokwengelosi echaziweyo kunye nobukhulu ngelixa isenza ingqiniba, ite okanye ikro ...